Yechokwadi uye yakawedzerwa chokwadi. Chii chinonzi OpenSpace3D | Linux Vakapindwa muropa
Yechokwadi uye yakawedzerwa chokwadi. Chii chinonzi OpenSpace3D
Apo mumwe wezvematongerwo enyika akataura izvozvo iyechokwadi chete ndechechokwadi, Haana kufungidzira kuti makumi emakumi emakore akatevera isu taigona kumubvunza kuti ndeupi wavo waaireva. Pasina kupinda mufilosofi uye kwepfungwa hurukuro tekinoroji inotipa dzimwe nzira mbiri kune izvo maziso edu asina kupfeka anoona; iyo chaiyo uye yakawedzerwa.
Mishumo kubva kuChechi yeKudenga inosimbisa kuti kumazororo aZvita, zuva rekutanga kwemakirasi uye zororo renyika, isu tichafanirwa kuwedzera chimwe chiitiko chekarenda yegore, iro rekutanga zuva rekugadzwa.
Ndinovimba hazviitike, asi dai vanga vari vechokwadi Virtual, yakawedzeredzwa uye zvese zviri zviviri zvakasanganiswa zvirimo zvinogona kubatsira zvakanyanya kubata nemhedzisiro uye nehupfumi mhedzisiro yekuzviparadzanisa.
Somuenzaniso, nyika dzinorarama nekushanya dzinogona kupa zviitiko zvekufamba kana zvitoro zvakakura zvemafashoni zvinoratidza zvigadzirwa zvavo nenzira yakazara. Zvakare, zvinogona kubatsira zvakanyanya kudzidza kure.
Ichokwadi icho Mazhinji eiyi tekinoroji achiri nemutengo wakakwira chaizvo wekuenda muhombe, asi kushandiswa kwemapurojekiti akavhurika sosi kunogona kubatsira kuti iwanikwe nyore. Mune ino post ini ndiri kuenda kundotaura pane mumwe wavo, OpenSpace3D. Ichi chishandiso chinowanikwa yeWindows chinotendera kuburitsa zvemukati zvakare mamwe mapuratifomu akadai seLinux uye nhare mbozha.
Icho chiri pamusoro yakavhurwa sosi chaiyo chaiyo yekuvandudza chikuva chakavakirwa kuvaka rakapfuma rechokwadi chairo chiitiko manyorerwo nemitambo inofambiswa neiyo chaiyo chaiyo
1 Yechokwadi uye yakawedzerwa chokwadi. Basic pfungwa
1.1.1 Zvimwe zvakanaka
Yechokwadi uye yakawedzerwa chokwadi. Basic pfungwa
Virtual Reality ine nharaunda inogadzirwa nemakomputa maiyo 3D maficha ekufananidza ayo anoratidzika sechokwadi kubva mumaonero emushandisi. Chishina chakakura ngowani ine chidzitiro chakaiswa pamberi peziso chinoshandiswa kuratidza ino nharaunda.
Kuwedzera chokwadi inosanganisa makomputa-anogadzirwa zvinhu munyika chaiye. Izvi zvinogona kuve 3D mhando, zvinyorwa, vhidhiyo, kana odhiyo.
Kune avo vanotaura zvakare nezve chakabatanidzwa chaicho umo chokwadi chaicho chakasanganiswa munguva chaiyo nenyika chaiyo.
Ipuratifomu yakagadzirirwa kugadzirwa kweyechokwadi uye yakawedzerwa chaiyo mitambo nemashandisirwo. Chinangwa chayo chakataurwa ndechekutora democratize chaiyo-nguva 3D kunyorera uye nekupa chishandiso kune vese vanogadzira pfungwa, kwete vanogadzira chete.
Native rutsigiro rwechokwadi chaihwo uye mafambiro ekuona ekufamba, zvese zvekutengeserana uye yakavhurwa sosi. Mamwe acho ndeaya, semuenzaniso, Leap Motion yekuonekwa kwekufamba kwemaoko, iyo Myo bracelet yekucherechedzwa kwemasaini, maNeurosky mahedhifoni ekufungisisa nekufungisisa, Emotiv Epoc yekutarisa zviratidzo zveEEG, Nonin Oxymeter yeiyo muyero weiyo rhythm. Moyo, HT1C Vive, Oculus uye Vuzix yeiyo chaiyo chaiyo yekushandisa kana Tobii EyeX yekutarisa kweziso. Zvakare, isu tinogona kushandisa chero Arduino inoenderana chishandiso uye chero yeVRPN inoenderana mudziyo uye yekutevera system.
Shanda nemaitiro maviri akawedzera echokwadi. Feature yekumaka kuona inobvumira kuti mufananidzo uoneke pane kamera, nepo Aruco yekumakisheni yekumaka inoita kuti zvive nyore kuita nekukurumidza kunyorera nemazhinji mamaki uye zvakare kuishandisa sechinhu chinooneka chinongedzo.
Iyo yekugadzirisa mamiriro anotendera iwe kuendesa 3D mamodheru mune anopfuura makumi mana mafomatiKana uchinge wapinzwa kunze, zvinokwanisika kuwedzera, kuumbiridza, kufambisa zvinhu uye kutsanangura parameter senge hunhu hwepanyama kana mifananidzo. Mhedzisiro inogona kutumirwa kunze ku3DS MAX, Blender, Maya uye Cinema 4D
Ine muunganidzwa weanopfuura zana nemakumi matanhatu emabasa akafanogadzirwas izvo zvinogona kusanganiswa ne ckumberi kunyorera pasina kukodha.
Iyo ine rutsigiro rwe multimedia zvemukati yekugadzira inonyudza nharaunda ine nzvimbo dzakapatsanurwa dze 3D odhiyo nemavhidhiyo zvemukati.
Inoshandisa Newton Dynamic's fizikisi simulation injini kudzokorora mhedzisiro yezvinhu senge kuwanda, kudzokedzana coefficient, kumhanyisa, kuzvidzora, uye kufamba kwemotokari.
Inotendera kuumba akawanda-mushandisi mashandisiro uye multi-mudziyo.
Izvo zvinoshandiswa zvakagadzirwa zvinogona kushandiswa paWindows, LInux, Raspberry Pi, Mac, Android uye iOS, kunyangwe zvisiri zvese maficha zvichawanikwa pane ese mapuratifomu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yechokwadi uye yakawedzerwa chokwadi. Chii chinonzi OpenSpace3D
Pop! _OS 20.04 inosvika yakavakirwa paFocal Fossa, mapikicha matsva ekhibhodi uye zvimwe zvitsva